latest covid news – Ministry of Hotels & Tourism Myanmar
ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ပြည်တွင်းခရီးသွားဧည့်သည်စစ်တမ်းကို မြန်မာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကောက်ခံနေခြင်းဖြစ်ပါသဖြင့် ယခု Survey Form တွင် ကူညီဖြည့်စွက်ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
COVID-19 ပတ်သက်သည့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အသေးစိတ် အကြံပြုချက်၊ လမ်းညွှန်ချက်စသည်တို့ကို ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်သော Ministry of Health တွင်တွေ့မြင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ခရီးသွားလာခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် အများဆုံးမေးမြန်းသည့် မေးခွန်းများ
Covid-19 Information for International Travelers in Myanmar can be found HERE.
COVID – 19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များအား ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်နေ့အထိ တိုးမြှင့်သက်မှတ်ထားပါသည်။
ပြည်တွင်းလေကြောင်းခရီးစဉ်များကို ဒီဇင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့မှ စတင်၍ပျံသန်းပြေးဆွဲသွားမည်
SOP for domestic Flight version -2
Further Extension of Effective Period of Temporary Measures to Prevent Importation of COVID-19 to Myanmar Through Air Travel [Up to31 December]
Announcement from the Department of Civil Aviation for the prevention COVID-19.
ပြည်တွင်းခရီးသွားများ သိရှိစေရန် ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးများအလိုက် Community Based Facility Quarantine (CBFQ) လိုက်နာရန် သတ်မှတ်ထားရှိချက်များ နှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဝင်/ထွက်ဂိတ်များနှင့် နယ်စပ်ဝင်/ထွက်ဂိတ်များမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ဝင်ရောက်လာမည့် ခရီးသွားများအတွက် အသွားအလာကန့်သတ်မှုနှင့် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်
MINISTRY OF HEALTH (mohs.gov.mm)
ဟိုတယ်၊တည်းခိုရိပ်သာများ၊ စားသောက်ဆိုင်များနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ
RELATED RECOVERY PLANS:
Tourism National Guidelines For COVID-19 Safe Services (Beta Version -VII)
COVID-19 ကြောင့်မြန်မာခရီသွားလုပ်ငန်းအပေါ် စီးပွားရေးသက်ရောက်မှုစစ်တမ်း
COVID-19 ဆိုင်ရာခရီးသွားလုပ်ငန်း ကုစားမှုအစီအစဉ်
မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးသွားကဏ္ဍပြန်လည်ထူထောင်ရေး မဟာဗျူဟာပြမြေပုံ
FOR DOMESTIC TRAVELER
FOR INTERNATIONAL TRAVELER
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးများအလိုက် Facebook Page များ
Tourism Nay Pyi Taw
Tourism Kyaing Tone
ကယားပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့မှ COVID-19 ဆိုင်ရာ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
အဝေးပြေးယာဉ်လိုင်းများ ပြေးဆွဲမှုအခြေအနေအား အများပြည်သူသိရှိနိုင်ရန်အသိပေးခြင်း
စားသောက်ဆိုင်များဖွင့်လှစ်ဖွင့်လှစ်ရာတွင် COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး အထောက်အကူ ဖြစ်စေရေးအတွက် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်အချက်များကို ထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း